नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : के के भने प्रहरी महानिरीक्षक सर्बेन्द्र खनालले अमेरिकामा ? जनताको आशा र विश्वाश पुरा होला त ?
के के भने प्रहरी महानिरीक्षक सर्बेन्द्र खनालले अमेरिकामा ? जनताको आशा र विश्वाश पुरा होला त ?
अफिसियल भिजिटमा अमेरिका आएका प्रहरी महानिरीक्षक सर्बेन्द्र खनालले अमेरिकामा रहेका नेपालीहरु सँग भर्जिनियामा अन्तरक्रिया गरेका छन । उनले स्पस्ट शब्दमा अब प्रहरी फोर्सले केही काम गर्ने दाबी मात्र गरेनन अपराध नियन्त्रण देखी धेरै कुरामा सुधार गर्ने जिकिर गरे । युनाइटेड नेपाल द्वारा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल मदर डट कम देखी किरण प्रताप केसी हुँदै पत्रकार र समाजका बिभिन्न ब्यक्तित्वहरुको प्रश्नको यसरी उत्तर दिए । हेर्नुस उनका भनाई र प्रश्नका उत्तरहरु जस्ताको तस्तै भिडियोमा
More Videos are here in these links below:
नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक सर्बेन्द्र खनाल र सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालसँग । देशले यि दुई कुशल र अशल राष्ट्रसेबक पाएको छ दुबै प्रहरी फोर्समा । यि दुबै हस्तिबाट ठुलो आशा र भरोसा राखेका छन जनताले । विश्वाश छ जनताको भरोसा टुट्ने छैन । अमेरिकामा भएको हाम्रो भेटघाट र भला कुसारीका क्रममा लिइएको तस्वीर ।